के पुरूष जस्तै महिलापनि चर’मोत्क’र्षमा पुग्छन् ?
स्वतः हुने डि’म्बोत्स’र्जनको अवस्थाबाट व्यवस्थित डि’म्बोत्सर्जनतर्फ उन्मुख हुँदा च’रमोत्कर्षको मूल स्रोत भगां’कुर लिं’गसँग घ’र्षण हुने यो’नीकेन्द्रभन्दा माथि सरेको देखिन्छ । से’क्सका क्रममा एकचौथाइ महिलाले मात्र च’रमोत्कर्षको आनन्द हासिल गर्ने गरेको अनुमान छ । यो कुनै महिला विशेषको असफलता अथवा शारीरिक कम’जोरीको उपज नभई प्रकृतिको निर्देशन हो ।
पुरुष किन चर’मोत्कर्षमा पुग्छ ? ‘जर्नल अफ एक्सपेरिमेन्टल जुलोजी’मा हालसालै प्रकाशित एउटा लेखअनुसार वी’र्यको सि’र्का फा’लेर महिलाको ज’ननेन्द्रियभित्र शु’क्रकीट प्रवेश गराई ग’र्भाधान प्रक्रिया सम्भव बनाउन पुरुष चर’मोत्कर्षमा पुग्ने विधि विकसित भएको हो । से’क्सका क्र’ममा पुरुषले वी’र्यपात गरेर मात्रै च’रम स’न्तुष्टि हासिल गर्न सक्छ ।
उनीहरूका अनुसार महिलाको चर’मोत्कर्षले प्र’जनन क्रि’यामा केही योगदान पु¥याउँदैन । ‘त्यसो भए यसको उपादेयता के हो त ?’ उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् । विभिन्न अनुसन्धानकर्ताले स्त’नधारी जीवका विभिन्न प्रजातिमा अनुसन्धान गरेर के दाबी गरेका छन् भने कुनै बेला प्रज’नन क्रि’यामा सघाउ पु¥याउने गुण नै अहिले चर’मोत्क’र्षका रूपमा महिलामा समेत विकास भएको हो ।
महिला यौ’नांगको विकासक्रमसम्बन्धी अध्ययनमार्फत समेत अनुसन्धाकर्ताहरूले प्रज’नन क्रि’यामा कुनै बेला चर’मोत्कर्षले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको थप प्रमाण फेला पारेका छन् । पत्तै नपाईकन हुने डि’म्बोत्सर्जनको अवस्थाबाट व्यवस्थित डि’म्बोत्सर्ज’नतर्फ उन्मुख हुँदा चर’मोत्कर्षको मूल स्रोत भ’गांकुर लिं’गसँग घर्ष’ण हुने यो’नीकेन्द्रभन्दा माथि सरेको देखिन्छ । आज से’क्सका क्र’ममा एकचौथाइ महिलाले मात्र च’रमोत्कर्षको आ’नन्द हासिल गर्ने गरेको भरपर्दो अनुमान गरिएको छ ।
‘किन्से इन्स्टिच्युट फर रिसर्च इन से”क्स’, जेन्डर एन्ड रिप्रोडक्सन’की विभागीय अनुसन्धाता एलिजाबेथ लोयड च’रमोत्क’र्षसम्बन्धी पाभ्लिसेभ र वाग्नरका तर्कसँग सहमत छैनन् । ‘उहाँहरूले से’क्स’का क्र’ममा शरीरभित्र हुने हा’र्मोन उत्सर्जनको सन्दर्भमा मात्रै च’रमोत्क’र्षबारे अध्ययन गर्नुभयो, तर महिलाले हासिल गर्ने च’रमोत्कर्षले हार्मो’न उत्सर्जनबाहेक पनि धेरै कुरा बताउँछ,’ उनले भनिन् ।
सन् २००५ मा एलिजाबेथको ‘द केस अफ द फिमेल अग्र्याजम’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएको थियो, जसमा उनले महिलाको च’रमोत्क’र्षसम्बन्धी अहिलेसम्म प्रकाशित २१ वटा सिद्धान्तबारे विवेचना गरेकी छिन् । अध्ययनपछि सबै सिद्धान्तलाई उनले दुई बृहत् सिद्धान्तअन्तर्गत समाहित गरेकी छिन् ।
जन्मि’एको पहिलो दुई महिनासम्म महिला र पुरुषमा समान गुण हुन्छन् भन्ने जीवविज्ञानले पुष्टि गरेको छ । यही अवधिमा मानव शरीरमा कोषिकालगायत समग्र शरीरको आधार निर्मित हुन्छ । ‘यही अवधिमा पुरुषले निप्प’ल (स्त’नको मु’न्टो) र महिलाले चरा’मो’त्कर्षको आधार हासिल गरेका हुन्छन्, जुन उनीहरूका लागि सहउत्पादन हुन् । महिलालाई चाहिने निप्प’ल पुरुषमा पनि रहन गयो र पुरुषलाई आवश्यक पर्ने चर’मोत्कर्षको आधार महिलामा पनि रहन गयो,’ उनी भन्छिन् ।
अर्को बृहत् सिद्धान्त हो– जोडीब’न्धन सिद्धान्त । यो सिद्धान्तअनुसार महिला र पुरुषबीच सामीप्य र घनिष्ठता सुनिश्चित गर्न महिला चर’मोत्कर्षको आधार तय भएको हो । च’रमोत्कर्षका क्रममा हासिल हुने परम’आनन्दको लालसाले महिलालाई पुरुषसँग रहन प्रेरित ग¥यो । महिलामा हुने यही गुणकै कारण अधिकतम प्रजन’न सम्भव भयो ।
उनका अनुसार महिला चर’मोत्कर्ष महिला र पुरुषबीचको सम्ब’न्धलाई बलियो बनाउने माध्यम पनि हो । ‘यौ’न आ’नन्द महसुस गरेपछि महिला आफ्नो पुरुषसँगै रहन प्रेरित हुन्छिन्, त्यस्तै आफ्नी महिलालाई पर’मस’न्तुष्टि दिने पुरुष पनि आफ्नो क्षमता देखेर मख्ख पर्छ र यो अनुभूतिले उसलाई सम्बन्धप्रति अझ प्रबल बनाउँछ,’ जोडीबन्धन सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो भनाइ राख्दै उनले भने ।
‘२५ प्रतिशत महिलाले मात्रै सम्भो’गका क्रम’मा च’रमोत्कर्षको वास्तविक आनन्द लिएका हुन्छन् र चर’मोत्कर्ष’मा नपुग्ने अथवा आक्कलझुक्कल मात्र पुग्ने महिला एकतिहाइ हुन्छन् ।
कोमिसारुकका अनुसार महिला चर’मोत्कर्षले परम आ’नन्द दिलाउँछ र महिला–पुरुष सम्ब’न्धलाई प्रबल बनाउँछ । त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा के भने यसले दिमागको त्यो भागलाई जागृत गरिदिन्छ, जसले मानिसमा उत्प्रेरणा जगाउने काम गर्छ । अफि’मयुक्त निद्राको औ’षधि से’वनलगायत सबै खाले आन’न्ददायक गतिविधिले दिमागको उक्त भागलाई जागृत गर्ने गर्छ ।
प्रकाशित मिति February 14, 2020